Iimveliso ezintsha ziyeza
Kutshanje inkampani yethu ityale i-USD500,000 kwisebe le-R & D kwiimveliso zethu ezintsha: impompo encinci yamanzi kumatshini wokubulala iintsholongwane, impompo yokufunxa umoya wokuphefumla, impompo yokuhambisa amanzi ashushu ashushu, impompo yoxinzelelo lwamanzi yokuhambisa amanzi pum ...
Xa kuthelekiswa nokusingqongileyo kwendalo, ubuninzi beentlanzi kwi-aquarium bukhulu kakhulu, kunye ne-excreta yentlanzi kunye nentsalela yokutya ingaphezulu. Ezi zidiliza kwaye zikhuphe i-ammonia, eyingozi ngakumbi kwiintlanzi. Okukhona inkunkuma iyanda, i-ammonia iveliswa ngakumbi, kwaye ...
Ngokweemeko zokusebenza, umoya opholileyo unokwahlulwa ube ngumgaqo wesandla kunye nommiselo ozenzekelayo. 1) Imowudi yohlengahlengiso lwencwadana kukuhlengahlengisa iparameter yokusebenza kwefeni okanye ishutter ngokusebenza ngesandla, njengokuvula nokuvala ifeni okanye ukutshintsha i-angle blade ye-fan, isp ...
Ngokubhekisele kwinkampani YUANHUA, isebe lethu le-R & D lihlala liphuhlisa iimveliso ezintsha, ezihlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe. Ukumangaliswa kwethu, Ukuchaphazeleka yintsholongwane entsha yesithsaba, ishishini lomthombo wobugcisa be-aquarium kunye neemfuno zentengiso yelanga zomelele kulo nyaka, kwaye ...